National Power News:: थाहै नपाई गीत सार्वजनिक National Power News:: थाहै नपाई गीत सार्वजनिक
थाहै नपाई गीत सार्वजनिक
Monday, July 29, 2019 National Power
प्रेम जिन्दगी, प्रेम संसार, प्रेम भए मान्छेले के गर्न सक्दैन र ? सुन्दर घरको निर्माण प्रेमबाटै हुन्छ । मान्छे मान्छेमा प्रेम यदी हुन्न भने झगडा अनि कलह मात्रै हुन्छ । संसार आखिर प्रेमबाटै चलेको छ र युगौं चलि रहने छ । प्रेमकै कुरा गर्नुपर्दा गायिका रिता के. सि को स्वरमा मायाप्रेमले भरिएको थाहै नपाई तिम्रो त्यो रूपू बोल रहेको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
द पिक स्टुडियोमा रेकडिस्ट समीर कार्कीबाट गीत रेकर्डिङ्ग गरिएको र राम कार्कीको संगीतर एरेन्जर रहेको उक्त गीत कवि, गीतकार एवं साहित्यकार सुरेन्द्र महर्जन अमर को रचनामा रहेको उक्त गीत मोशन नेपाल टि.भीबाट सार्वजनिक गरिएको हो । रोशन कुमारको निर्देशनमा दिप गुरुङबाट इडिटिङ्ग गरेको यस भिडियोलाई सुदिप पंगेनीबाट छायांकन गरिएको थियो ।